Iimpawu zekrisimesi ze-Android | I-Androidsis
Khuphela okona kulungileyo Iphephadonga lekrisimesi kwi-smartphone yakho ye-Android okanye ithebhulethi. Kule mihla ikhethekileyo sihlala siyichitha nosapho kunye nabahlobo, kuhlala kulungile ukunika umntu igama kwifowuni yethu, ke ngoko, ngezantsi uzakufumana uluhlu olubanzi lweemifanekiso ezimiselweyo zeKrisimesi.
Yeyiphi indlela ebhetele yokubhiyozela ukufika kweKrisimesi kunokuguqula ifowuni yakho ye-Android! Fumanisa kweli candelo ukhetho olungcono lweemvelaphi zeKrisimesi ezikhoyo kwiifowuni ze-Android okanye kwiitafile. Enkosi kubo ungangena kumoya weholide kwaye unike i-smartphone yakho ifestile.
Fumanisa yonke imvelaphi yeKrisimesi ye-Android onokuyifumana kwigalari yasimahla kunye nesisombululo esifanelekileyo. Iyafumaneka kwi-smartphone okanye ithebhulethi. Nika i-Android yakho ikrismesi!